Udaka olwenziwe ngaphambili - iDivenland
Umqondo, udaka nodaka
Ukwakhiwa kwamatshe nokwakha ukhonkolo njengengxenye ebaluleke kakhulu ekuthengisweni kwezinto zokwakha, i-cellulose ether idlala indima ebalulekile. Udaka omuhle kufanele ube nomsuka omuhle futhi okulula ukuwusebenzisa, ummese obushelelezi non-non-stick, isikhathi esanele sokusebenza, okulula ukukwenza; ekusebenzeni ngomshini kodaka kufanele kube kuhle ngokwanele ukuthi kube lula ukukusebenzisa, ummese obushelelezi nongenantambo, isikhathi esanele sokusebenza, kulula ukulinganisa; kumakhenikhi odaka kufanele abe muhle ngokwanele ukufaka, ummese obushelelezi non-non-stick, okulula ukukwenza; kumakhenikhi odaka kufanele abe muhle ngokwanele ukufaka, ummese obushelelezi non-non-stick, okulula ukukwenza; ekusebenzisaneni nosimende kufanele kube kuhle ngokwanele ukukwakha namhlanje, udaka kufanele futhi lube nezindawo ezinhle zokupompa ukugwema amathuba okuqothuka kwodaka nokuxhuma amapayipi. Umzimba owenziwe lukhuni owenziwe ngomzimba kufanele ube nezakhiwo ezinhle zamandla nokubukeka komhlaba, amandla afanelekile acindezelayo, ukuqina, akukho sigubhu esingenalutho, akukho ukuqhekeka.
Izakhiwo zokugcina amanzi ze-Max cellulose ether zinciphisa amanzi amunwa yi-sub-vacant substrate, zikhuthaza ukungcola okungcono kwezinto ezibonakalayo ze-gel, ezindaweni ezinkulu zokwakha. Kunganciphisa kakhulu amathuba wokuqhekeka owomile odaka lwakudala futhi uthuthukise amandla e-bond; amandla alo okuqina angathuthukisa ukuthambisa konkala omanzi kuya kusezingeni eliphezulu lesisekelo. I-cellulose ether iqinisa udaka olumanzi, futhi inciphise noma igweme ukwakheka nokuqanjwa kwamanzi. I-Rheology nokuncipha kokumelana, ngaleyo ndlela kwanda ukupompa nokunciphisa umfutho wabasebenzi. Ama-ethers e-cellulose aguquliwe ahlinzeka ngezakhiwo ezibalulekile zokulwa nokuguga lapho ufaka izigqulo ezijiyile, ezinganciphisa isikhathi sokwakha futhi zinciphise Ukusingathwa.
Udaka olumanzi luyinhlanganisela kasimende, okuhlanganisiwe okuhle, ukuxubana (ikakhulukazi i-cellulose ether), amanzi nezakhi ezahlukahlukene ezinqunywe ngokwezakhiwo, ngokwesilinganiso esithile, ngemuva kokulinganisa nokuxuba esitshalweni sokuxuba, bese kuyiswa endaweni ukusetshenziswa ngokuxuba iloli, kufakwa ezitsheni ezikhethekile zokugcina, futhi kusetshenziswe esikhathini esibekiwe.
Uma kuqhathaniswa nesiko lokuxuba indawo yendabuko, umehluko omkhulu ukwethulwa kosimende obushiswe ngomshini, njengokwethulwa kochungechunge lwe-Max cellulose ether kungaba yi-admixture eyenza ukusebenza komdaka kube lula, ngakho-ke kwenza udaka olusha luxube kalula, isilinganiso sokugcinwa kwamanzi aphezulu, ibanga elide, ukuphakama okukhulu ngemuva kokupompa kusenokusebenza okuhle kokusebenza. Izinzuzo zayo ezinkulu ukusebenza kahle kokwakhiwa, ikhwalithi enhle yodaka ngemuva kokwakhiwa, futhi ngenxa yejubane elikhulu lokuqala lodaka lapho ufafaza. Ngakho-ke, ingaba nokubamba okuphephe kakhulu nge-substrate, okunganciphisa ngempumelelo ukwenzeka kokuqhekeka kwesigubhu okungenalutho.